Ikhaya elikude nekhaya: 4 BHK, indlu enendawo yokuphola engeyiyo eye-AC. - I-Airbnb
Ikhaya elikude nekhaya: 4 BHK, indlu enendawo yokuphola engeyiyo eye-AC.
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguRajendran
Siyintsapho yakwaNagercoil, esihlala eNagercoil kwizizukulwana ezininzi ukususela ngo-1934. Sinikezela nge-4 BHK yethu, amagumbi okuhlambela ayi-2, angewona i-AC villa. ‘Ikhaya elikude nekhaya‘ likwindawo enamagqabi, ekwizinga eliphezulu ekwimizuzu eyi-5 (uhamba ngeenyawo) ukusuka kwiofisi yomqokeleli wesithili eNagercoil. 2.5 Kzar. ukusuka kwisikhululo seBhasi kunye ne-2.75 k.m ukusuka kwisikhululo sikaloliwe.
Yonke indlu enendawo yokuphola inikwa intsapho/ iqela elinye ngexesha. Yamkela iindwendwe eziyi-4 (ubuncinci) ukuya kweziyi-15 (ubuninzi). Uza kuziva ukwindlu kaPapa.
Le ndlu yindlu yabucala, enamabala amabini, enamakhaya amabini azimeleyo ayi-1,500 sq.ft. Ime kwindawo enkulu, kukho imithi nezityalo eziliqela, nto leyo eyenza kuphumle kubushushu. NdinguRhulumente waseIndiya oye wathatha umhlala-phantsi; mna nosapho lwam sihlala phantsi. Indawo yokuhlala kumgangatho wokuqala yile uyibonayo apha.
Kukho amagumbi okulala ayi-4 anefenitshala (anefeni esesilingini), igumbi lokuhlala/indawo yokutyela, ikhitshi, amagumbi okuhlambela ayi-2 apheleleyo, ibhalkhoni (kumgangatho wokuqala) kunye nelaphu (kumgangatho wesibini). Nceda ujonge amagama ahamba neefoto nganye ukuze ufumane inkcazelo eneenkcukacha ngezinto ezinokusetyenziswa kwigumbi ngalinye. Indawo yangasemva enamagumbi aliqela inokuthatha iimoto eziyi-3 ukuya kweziyi-4 (simahla). Le ndawo ingasemva ingaqeshiswa ngokwahlukileyo kwimicimbi. Igumbi lokuhlambela elahlukileyo liyafumaneka nakwindawo yokuqhuba okanye yokuqhuba.
Zonke iifestile nemingxunya zikhuselwe ngeenethi zeengcongconi. Kukho into enye eyenza kufudumale ekhoyo kwigumbi lokulala elikhulu. I-ayini ingafumaneka xa icelwa. Ikhitshi linesitovu esisebenza nge-induction kunye nezinto zokupheka/iipani zokupheka ezisisiseko. Sinikezela ngeepleyiti, nezinye izinto zokuhombisa (ukuze zicoceke).
1. Ixabiso elisisiseko losuku le-Rs.1200 liquka ukuhlala kwabantu abayi-3.
2. Iindwendwe ezongezelelekileyo zibhataliswa i-Rs.price} ngomntu ngamnye (nceda uqaphele: igumbi lokulala le-4 lifumaneka kuphela xa ukubhukisha kuquka iindwendwe eziyi-8 okanye ngaphezulu).
3. Nceda ujonge indlela yokubeka amaxabiso ka-Airbnb ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngemali yokucoca, iirhafu nezinye izinto.
1. Ukungatshayi okanye ukusela utywala naphi na ngaphakathi kweyadi (nceda uqaphele, le yindawo yokuhlala). Iiyure eziyi-24 ziqala ngo-8.00 kusasa ukuya kusuku olulandelayo 8.00 A.
2. Zonke izihlangu (ii-chappals nezihlangu) zimele zishiywe ezantsi.
Nceda uqaphele: Ukuba unemibuzo evela kuAirbnb, asivumeli ukubhukisha ngokuthe ngqo. Ukubhukisha singakwenza kuphela kwiwebhusayithi okanye kwi-app ka-Airbnb. Asikwazi ukwabelana ngeenkcukacha zethu zonxibelelwano ngaphambi kokubhukisha. Siyakuxabisa ukuqonda kwakho ngale nto.
'Ikhaya elikude nekhaya' likwiNagercoil Town, ikomkhulu lesithili saseKanyakumari kwaye ikufutshane neendawo ezininzi ezinomtsalane kubakhenkethi. Siyakuvuyela ukucebisa ngomntu ngamnye. Ezinye iiwebhusayithi eziphawulekayo zezi:
1) Itempile yaseNagaraja (iikhilomitha eziyi-2,5).
2) Ibhotwe lasePadmanabhapuram (iikhilomitha eziyi-17).
4) I-Tirparappu ekwindla (30 kms).
5) Ii-Pothys (ii-sarees zesilika) kunye neevenkile ze-Lalitha Jewellery, kunye nevenkile enkulu yokutya (i-Derik) ziyafumaneka kufutshane (ngaphantsi kweekhilomitha eziyi- ½).
Sihlala kumgangatho osezantsi, kwaye sikhona ukuze siphendule nayiphi na imibuzo okanye sincede xa kuyimfuneko. Nangona le ndlu ingeyiyo indawo yokushishina, sizama kangangoko sinako kwintsapho yethu ukuze ukuhlala kwakho kube mnandi. Sithetha isiNgesi ngokutyibilikayo, isiTamil; kunye nesiHindi esiphakathi, iMalayalam, iTelugu kunye neKannada.
Sihlala kumgangatho osezantsi, kwaye sikhona ukuze siphendule nayiphi na imibuzo okanye sincede xa kuyimfuneko. Nangona le ndlu ingeyiyo indawo yokushishina, sizama kangangoko sina…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nagercoil